Tareenka cad ee martigelinaya xusuusta Atatürk | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraXusuus-qorka Aqalka Cad ee Tareenka Atatkrk
16 / 02 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Headline, TURKEY
Tareenka cad ee martigelinaya xusuusta Atatürk
Gawaarida, oo ah tusaalaha kaliya ee gaarka ah ee tareenka cad ee ay isticmaali jireen Atatürk inta lagu guda jiro safarada wadankiisa (1935-1938), waxaa lagu soo bandhigay Ankara Garda ilaa iyo 1964, oo ku xigta Atatürk House iyo Matxafka Tareenka ee Dagaalkii Xornimada. Waxaa ka diiwaan gashan Wasaaradda Agaasinka Guud ee Dhaqanka Buugta Madxafyada iyo Matxafyada sanadkii 1991-kii “Hantida dhaqan ee ay ilaalinayso Atatürk”.
Faahfaahinta Farsamo ee Wagon White
Miisaanka: 46.3 ton
Soo saaraha: LHV Linke Hofmann-Werke, Breslau, 1935
Wagon-taasi oo uu isticmaalay Ataturk dhammaan safaradii waddanku u dhaxeeyay sannadihii udhaxeeyey 1935-1938 ayaa sidoo kale ka soo shaqeeyay "marti-gelinta safarkiisa ugu dambeeya.
Sabtidii, Nofeembar 19, 1938, meydkii Atatkrk waxaa laga soo qaaday Xarunta Dolmabahçe waxaana lagu meeleeyey dagaalka Yavuz ee Sarayburnu. Waxaa jiray xaflad miiska dhexe ee gaarigaan 'tareenka cad' ee sugaya Izmit. Waxay ahayd 20.23. Lix xabadood ayaa laga gubay jirka oo dhan, lixdaas sarkaalna waxay ku bilaabeen hiligooda iyagoo ixtiraam ka muujinaya. Markii kooxdii qaybtu ay baroorteen, 20.32, tareenka wuxuu u dhaqaaqay Ankara inta u dhexeysa ilmada kuwa ku soo aruuray xarunta tareenka.
Tababarka Ankara 20 November November 1938 ayaa Axaddii timid 10.04. Inönü, xildhibaanno, askar, bilays, saraakiisha, ardayda iyo shacabka ayaa sugayay saldhigga. Xabashida Ata ayaa laga soo qaaday suuqa 10.26, waxaana lagu dhejiyay bannaanbax balaaran oo ku yaala meel ka baxsan Ceeriga Dhexe ee Steering Building oo halkaas oo uu amar ku siiyay Dagaalka Xoriyadda, wuxuu safarkiisa u dhigay safarkiisa oo uu safarkiisii ​​ugu danbeeyay la galay "Tareen Cad".
Tareenka Cad ee Wagon
Musqusha / Suite musqusha
Ilaaliyaha / Suite qolka
Qolka jiifka Atatürk
Inta soo hartay waxay ka kooban yihiin qayboteeda.
Ilaa iyo hada, ma jiro faafaahin faahfaahsan oo ku saabsan astaamaha 'Train White Train', oo laga dhisay Jarmalka sanadkii 1935 kii si uu hogaamiyaheena weyn Atatürk u adeegsado safarada gudaha. Waxaan u aragnay dhinaca farsamada ee tareenka inuu yahay meelayn si aan u soo bandhigno xusuustayada maalmahaa quruxda badneyd ee laxiriirta dalabka macluumaadka asxaabteena qiimaha leh ee Tareenka.
Tareenka Caddaan wuxuu ka koobnaa 9 gaari. Kuwani waa hoolalka cuntada lagu cunteeyo iyo hoyga Atatürk, hool looguna talagalay Xoghaynta Guud ee Madaxtooyada iyo Madaxa cadaaladda, Restourant oo leh laba gawaari oo hurdo u leh magacyada Dowlada lagu casuumay, iyo laba II. Waxay ka koobneyd gaari-wade iyo 4-axle booska.
Dhererka shanta hogaan ee ugu horreeyay waxay ahaayeen 21, halka kuwa kalena ay ahaayeen 19.6 mitir. Qolalka wagon waa kuwo dabiici ah marka loo eego shuruudaha waqtiga, oo ay ku qalabeysan yihiin qalabka casriga iyo farsamada ee ugu casrisan. Gawaarida kasta ee Görlitz wuxuu kuxiranyahay culeysyo culus waxaana lagu qalabeeyay bir-qabeyaasha nooca-gacanta, bir-qabashada gacanta iyo hawada.
Hal albaab oo balakoon u eg ayaa ku yaal meel dhamaadka qol jiifka Atatürk. Daaqadaha dariishadaha anteenooyinka ayaa si habsami leh loo hayey si ay u arkaan hareerahu inay yihiin kuwo raaxo leh oo muuqda. In kasta oo albaab hore loogu jiray doonnida kale ee hore, haddana marintani ma ahayn mid la isku qurxiyo sida kuwa kale. Jaranjarada jaranjarada waxay waran mariyeen.
Darbiyada gudaha ee hoolka waxaa ku jiray qumbaha Caucasian iyo saqafka ka sameysan alwaax fudud. Waxa kale oo jiray miis daboolan ebony, kursi weyn oo daboolan iyo kuraas kale oo yar oo qolka fadhiga ah. Daaqada daahyada waxay ka sameysan tahay jaallad casaan ah oo jajab ah (Akilla) taffeta. Waxaa jiray raadiye, laba koronto oo koronto, seddex dareen garaacis ah iyo taleefan hoolka ku yaal.
Sariir weyn oo ku yaal qaybta qolka jiifka, derbiyada waxaa ku daboolay miro casaan kor ah, saqafka waxaa ku daboolay buul yar. Mar labaad, waxaa jiray miis labbiska oo leh muraayad iyo suunno gacmeed oo loo isticmaali karo miis qoris marka la xidho. Dhamaan qeybaha miinada ayaa la sumeeyay.
Hawo-mareenka (Wendler) wuxuu la shaqeyn doonaa aaladda nuugista hawada. In kasta oo gaadhigu ku xidhnaa rakibidda tareenka, ayaa sidoo kale loo qalabeeyay in lagu kululeeyo biyo kulul. Qalabka korantada waxaa la keenay laba uruursi iyo dynamos, daaqadaha hortooda waxaa ku jiray indhoolayaal indho-indheyn ah oo Venetian ah oo daboolan gaas gaar ah si looga hortago duqsiyada iyo cayayaanka la midka ah inay galaan dhabarka.
Qolka cuntada ayaa dhererkiisu ahaa 8 mitir. Waxay kaloo lahayd qolka labiska, kala badh iyo qayb buuxa iyo musqulo. Darbiga wuxuu ka samaysan yahay gogoldhig, saqafku wuxuu ahaa midabbo, derbiga waardiyaha wuxuu ahaa oak, mar kale ebony, derbiga afarta qofood wuxuu ahaa mahogany, darbiyada ku yaal qolka yar ayaa ahaa malab-mahogany, albaabka waxaa laga rinjiyey caddaan caano.
Markii si buuxda loo furay, waxaa jiray miis weyn oo la cunteeyo oo ah 5 mitir, laba kursi oo waaweyn, kuwani waxaa hareereeyay 16 kursi oo yaryar oo ay kuxiran yihiin maqaar buluug ah, waxaa sidoo kale jiray af hayeen ku hadla raadiyaha. Hal gees oo hoolka, maacuun la diyaarshay ayaa lamid ah qalabka qolka jiifka.
Waxaa jiray 4 sofas, komi iyo qeybaha kale ee shaqaalaha kaabayaasha ah, musqulaha iyo meelaha lagu dhaqo, sidoo kale jikada iyo qolka waxaa loo adeegsan karaa sariir halkii sariir laga dhex dhigi lahaa Başyaver iyo Xogheynta. Foornada waxaa ku jirtay qaboojiye ka duwan khaanadaha. Gaariga xamuulka ah wuxuu lahaa qol ay ku jiraan kursi lagu dhaqdo, xafiisyo, iyo hool yar.
Mid ka mid ah baabuurkii kale wuxuu lahaa hool yar kan kalena wuxuu lahaa qaybo hoosaad. Hoolka qadada wuxuu ku jiray laba qaybood. Kushiinka ka sokow, waxaa jiray afar miis oo loogu talagalay saddex iyo afar qof, laba saf oo loogu talagalay laba qof qolka cuntada weyn iyo 24 miis oo loogu talagalay afar qof. Labada gaari ee xigay waxay lahaayeen 8 qaybood oo harag ah. Markii gadaashiisa laba qaybood oo qolo walboo lakala qaado habeenkii, afar laamood ayaa la sameeyay. Gawaaridaan, oo sidoo kale lahaa musqulo, waxay ku kululeeyeen fadhiga fadhiga sida furgon-ka. Dhamaan gaadhiga waxay ahaayeen buluug mugdi ah oo mugdi ah safka hoose ee daaqadda, iyo rinji cadcad ilaa saqafka kore. Gawaarida qaar waxay saqafka saqafka gurigooda ku leeyihiin fiilooyin anteenooyin raadiye.
Tareenka White waxaa laga raray Ankara oo loo wareejiyaa Ankara, iyo Haydarpasa waxaa loo wareejiyaa shaqaalaha Haydarpasa, meel kasta oo ay aadaan dalka, way ku laaban doonaan, isla shaqaalahaas wey soo laaban doonaan, kaliya mashiinnada keydka dhuxusha iyo dayactirka xarumaha bakhaarka ayaa is beddeli doona. Tareenadaani dhab ahaantii waxay lahaan doonaan kor u kac, mararka qaar waxaa sidoo kale jiri kara tareen gaar ah oo laga soo diro hore sidii duuliye. Dhamaan shaqaalaha tareenka waxaa laga soo xushay khibrad, taxaddar, kuwaas oo lagu tijaabiyay waajibaadkooda, dharku waa nadiif oo waa bir, Waxaan si fiican u xasuustaa in aagagga mashiinnada 'Machinist-ka' ay ku shaqeeyeen galoofisyo cad markii ay soo galeen Garlar ...
Gawaaridaan gaaska ku shaqeeya waxay ahaayeen kuwo aad u nadiif ah, si wanaagsan loo dayactiray, miinooyinkooda jaalaha ah ayaa dhalaalayay, aagaggoodana waxay adeegsadeen Kormeerayaal Gawaarida badan, shaqaalaha kontaroolada dhib badana kama bixi doonaan. Vgo, I iyo II Kormeerayaasha, Taleefoonada iyo Sahamada Telefoonada oo ay wataan agabyadooda oo dhan waxay ku sugnaayeen tareenka tareenadan, kooxaha dayactirna boorsooyinkooda kama soo saaraan dhabarkooda. Amarka General No. 501 waxaa lagu dabaqayaa inta uu socdo tareenka, shumacyada shaabadaysan ee baqshadahaas ee bishaas lagu qariyey sanduuqyada Xarunta iyo Xarumo ayaa lagu furayaa iyadoo laga qaadayo shumacyada shaabadaysan, lambarka sirta ayaa la bartay, kuwa garanaya ereyga sirta ah waxaa loo raraa tareenka markii loo baahdo caawimaaddooda.
Mar labaad, tareenadan ayaa waxaa weheliyey Kormeerka Wadooyinka iyo Taliyeyaasha Laanta, Saraakiisha Kormeerka Tareenka, Dhakhaatiirta Qaybta, Kormeerayaasha guud ee adeegyada firfircoon, iyo teleefanka gacanta iyo feeraha taleefanka ayaa diyaar loo ahaa amarrada. Saldhigyada waxaa lagu nadiifiyay daryeel gaar ah dhawr maalmood ka hor, habeenkii, iyadoo laambadaha qaaliga ah ay gacmahooda ku jiraan, dadka ku nool tuulooyinka ku hareereysan ayaa isugu soo baxay aaggyada Saldhigga iyagoo rajo iyo raynrayn ka qaba in la arko Ataturk, iyo dhinaca amniga, khadadka iyo marinnada ayaa gacanta ku haya Gendarmes maxalliga ah iyo booliiska magaalooyinka.
Maamulayaasha, gudoomiyeyaasha degmooyinka, saraakiisha degmada, taliyayaasha, maayarada, iyo maamulayaasha xarumaha la midka ah ee gobolada, degmooyinka iyo magaalooyinka oo tareenka uu istaagi doono maalintaas tareenka wuxuu ku soo dhaweynayaa dharka cusub ee ay ka soo jeexjeexaan, barafka, dharka dib u soo celinta ama dharka madow ee qiiqa, laaluushka habeenkii, dhismayaasha saldhigyada oo leh calan iyo nalal habeenkii. Waa mid qalabaysan, haddii Ataturk ay soo degto magaalada, waddooyinka waaweyn iyo isgoysyada waxaa lagu sameeyaa waxyaabo qurux badan oo guul ah.
Muuqaal kale oo muddadaas ah; Waxay ahayd daahfurka Biladka Cas ee xorriyadda, oo ku faanaa ka qeybqaadashada dagaalkii madax-bannaanida ee hoos imaadka taliska ATATÜRK, naasaha kuwa badan, laga bilaabo gudoomiyegeeda ilaa taliyeheeda ilaa kan ugu liita. Maalmahan, maalmahan, waxay u muuqdaan kuwo aad u yar oo soo noqnoqda xafladaha qaran, maadaama dadkani ay dib u dhacayaan waqti ka dib.
Ataturk wuxuu safarkiisii ​​ugu dambeeyay ee safarka ah ka soo tegey Ankara 12.11.1937 saacaddu markay ahayd 17:50, ka hor Treenka Cad, wuxuu si toos ah u aaday Gobollada Bari, Kayseri - Sivas - Diyarbakır - Elazig - Malatya - Adana iyo Mersin, ka dibna Konya ' Waxay aadeen Afyon iyagoo sii maray habeenki, iyagoo halkaas joogay hal saac, waxay ku noqdeen Ankara 21.11.1937, 23:30, Eskişehir.
A. Lütfi Balamir, (Kormeeraha TCDD howlgab ah)
Ataturk's Wagon White Train (Sawir-Sawirka Sawirka)
Galip Longuncanin Mudanya Tababarka Safarka
Tareenka nabadgelyadu wuxuu tagi doonaa Thessaloniki ee Atatürk
Wadada tareenka ee Trabzon ee Atatürk lama samayn doono sanadaha 90
Maanta taariikhda: 13 January 1931 Hadalka Ataturk ee ku saabsan muhiimada tareenada
TCDD waxay dib u soo celisaa alaabada Ataturk
Turki Thessaloniki oo loo yaqaan 'Taxpayer Private Tax Train' oo ku saabsan sanadguuradii dhimashada Ataturk
Maanta taariikhda: 4 Febraayo 1935 Tilmaamaha Ataturk ee xoogga saaraya tareennada.
Maanta taariikhda: 19 November 1938 Laga soo bilaabo jidhkii Atatürk, Dolmabahçe ...
Maanta oo Taariikh ah: 19 Noofambar 1938 maydka Atatürk oo laga soo diray Dolmabahçe
Atatürk Train White
Tareenka cad ee Atatürk